ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်ကုန်များ - Yum Yum
ကျွန်ုပ်တို့၏ ပထမဆုံးခေါက်ဆွဲခြောက်ထုပ်ကို ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင် စတင်ထုတ်ခဲ့ပြီးချိန်မှစ၍ ယခုဆိုလျှင် အများကြီး တိုးတက်ပြောင်းလဲခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ ယခုအခါ ကျွန်ုပ်တို့ ကုမ္ပဏီမှ ခေါက်ဆွဲခြောက်ထုပ်ပုံစံဖြင့်အရသာ (၁၇)မျိုး၊ခေါက်ဆွဲခြောက်ဗူးပုံစံဖြင့်အရသာ (၇)မျိုး ထုတ်လုပ်ထားသည့်အပြင် အရသာရှိပြီး စားသုံးရလွယ်ကူသည့် အဆာပြေခေါက်ဆွဲခြောက် (၃)မျိုးကိုလည်း ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။
This hearty Mala Xiang Guo featuresaton of fresh vegetables, making it the perfect recipe to use all that fresh produce. It’s also great during cooler weather. Make sure you serve your quality time.
Our tasters simply loved the hot and spicy, fresh garlic, ginger flavor and splash of lime make great family favorites.
Yum Yum Jumbo can give the delicious taste of sweet by shrimp, and fresh and clean ingredients with sour and chili flavor in cream Tom Yum soup like real Tom Yum style.
ယမ်ယမ်၏ ပထမဆုံးထုတ်လုပ်သည့် ခေါက်ဆွဲခြောက်ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရောင်းအကောင်းဆုံး ခေါက်ဆွဲခြောက်လည်းဖြစ်သည်။ အရသာသိမ်မွေ့သည့် ဤခေါက်ဆွဲခြောက်သည် တရုတ်ဟင်းလျာများကို အခြေခံ၍ထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး စားသုံးသူမျိုးစုံမှ နှစ်သက်ကြသည်။ သဘာဝကြက်သားအရသာကို ငရုပ်သီးနှင့် ကြက်သွန်ဖြူတို့၏ အဆီအနှစ်နှင့် ပေါင်းစပ်ထားသောကြောင့် လူတိုင်းကြိုက်နှစ်သက်ကြသည်။
ပုစွန်ချဉ်စပ်ခေါက်ဆွဲခြောက်ကို ထိုင်းရိုးရာ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်များနှင့် ပုစွန်အရသာတို့ ပေါင်းစပ်ပြီး ထုတ်လုပ်ထားသည်။ အချဉ်အစပ်ပြင်းသော အာရှဟင်းလျာများ၏ အရသာရှိိလှသည့် အမှတ်အသားဖြစ်သည်။
ကြက်သွန်နီ၊ ကြက်သွန်ဖြူနှင့် ဘဲသားတို့ကို ပေါင်းစပ်ထားသည့် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ထူးခြားသည့် အရသာဖြစ်သည်။
နောင်နှစ်များတွင် သတ်သတ်လွတ်အရသာ၊ ကြက်သားဆီချက်အရသာ၊ အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲအရသာ၊ တုံယမ်း ပုစွန်အရသာ၊ တုံယမ်း ကြက်သားအရသာ၊ ခေါက်ဆွဲသုပ်နှင့် ကြက်သွန်ဖြူကြက်သားအရသာတို့ကို ထပ်မံတီထွင်ခဲ့သည်။
သတ်သတ်လွတ်စားသူများအတွက် ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်များကို ပေါင်းစပ်ထားသည့် ခေါက်ဆွဲခြောက်ဖြစ်သည်။
အရှေ့တောင်အာရှ အရသာများထဲတွင် ထူးခြားသည့် အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲအရသာဖြစ်သည်။
ထိုင်းရိုးရာ ချဉ်စပ်တုံယမ်းနှင့် မွှေးပျံ့သည့်ပုစွန်အရသာဖြစ်သည်။
အရသာရှိလှသည့် ကြက်သားခေါက်ဆွဲကို စပ်စပ်ပြင်းပြင်း မာလာအရသာနှင့် တစ်မူထူးခြားထားခြင်းဖြစ်သည်။
ပုံမှန်တုံယမ်းပုစွန်၏ အရသာအပြင် ထူးခြားသည့် အနှစ်အရသာကြောင့် စားသုံးသူတို့ကြိုက်နှစ်သက်ကြသည်။
ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်မျိုးစုံဖြင့် ဖန်တီးထားသည့် တုံယမ်းကြက်သားအရသာသည် ထိုင်းရိုးရာအစားအစာကို တစ်မူဖန်တီးထားခြင်းဖြစ်သည်။
အရသာထူးခြားပြည့်စုံပြီး အာရှဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်မျိုးစုံပါ၀င်သည့် ထူးခြားသည့်အရသာဖြစ်သည်။
ကြက်သားအရသာ ခေါက်ဆွဲကတော့ Yum Yum ၏ ပထမဆုံး အသင့်စားခေါက်ဆွဲဖြစ်ပါတယ်။ အရောင်းရဆုံး ခေါက်ဆွဲဖြစ်ပြီး သူရဲ့ ကြက်သားအချို ရနံ့နဲ့ ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ ကြက်သွန်ဖြူနှင့် ငရုပ်သီး ဟင်းခတ်အမွေးကြိုင်ရနံ့က လူကြိုက်များလှပါတယ်။ ဒီအရသာ ပေါင်းစပ်မှုက ကြက်သားအရသာ ခေါက်ဆွဲကို စားသုံးသူ အားလုံ အသက်ရွယ်မရွေး ယဉ်ကျေးမှုမရွေး ကြိုက်နှစ်သက်စေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
တုန်ယမ်း ပုစွန်ရသာကိုတော့ ထိုင်းရိုးရာ ဟင်းခတ်အမွေးအကြိုင်များနှင့် ခံတွင်းတွေ့စေမယ့် ပုစွန်အရသာကို ပေါင်းစပ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ပူပူလောင်လောင် ချဉ်ချဉ်စပ်စပ် အရသာ ပြင်းပြင်းက အာရှရိုးရာ ချက်ပြုတ်နည်းရဲ့ သင်္ကေတ တစ်ခုဖြစ်ပြီး စားချင့်စဖွယ်ဖြစ်စေမှာ အမှန်ပါပဲ။
Xcite တုံယမ်း ကြက်သားအရသာ
အရသာရှိလှသည့် ကြက်သားခေါက်ဆွဲကို စပ်စပ်ပြင်းပြင်း ထိုင်း တုံယမ်းအရသာနှင့် ဆန်းသစ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
တစ်မျိုးသားလုံးအကြိုက် ဒီအစာပြေစာ ခေါက်ဆွဲကတော့ အသားကင်အရသာ မီးခိုးနံ့ သင်းသင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ဟာ အသင့်စားခေါက်ဆွဲဖြစ်သော Chan Noi ခေါ် ပြောင်းဖူးရသာ အစာပြေစာ ခေါက်ဆွဲကို ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင် ပထမဦဆုံး ဈေးကွက်ထဲ ဖြန့်ချီခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ယခုချိန်မှာတော့ အချိုရသာမှသည် ဟင်းရသာအထိ အရသာ ၉ မျိုးကို မူလရသာမပျက် အချိုရသာ သင်းသင်းဖြင့် အစာပြေစာများအဖြစ် ရရှိနေပါပြီ။
ချိုချို ချဉ်ချဉ် အစာပြေစာကို ခပ်စပ်စပ် အရာသာနှင့် ပေါင်းစပ်ထားခြင်းက လူကြိုက်များတဲ့ ထိုင်း တုန်ယမ်းရသာမှ ဆင်းသက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။